11 Jaamacadaha Bilaashka ah ee Waxbarshada ee Ireland Ardayda Caalamiga ah 2022
Jaamacadaha bilaashka ah ee wax lagu barto ee Ireland ee loogu talagalay ardayda caalamiga ah waa wax adag laakiin qoraalkan baloogga ah, waxaan u cadaynay sidii crystal. Jaamacadahaasi waxay kor u qaadaan heerka waxbarasho ee ardayda iyaga soo codsata iyagoo siinaya waxbarasho lacag la'aan ah. Si kastaba ha ahaatee, waxay leeyihiin xaalado kala duwan oo ay u furan yihiin ardayda.
Ireland waa mid ka mid ah afarta dal ee Boqortooyada Midowday ee ku caanbaxay dhul -gariirkooda iyo martigelinteeda. Waxaa loo yaqaanaa dalka ugu saaxiibka badan adduunka taas oo ka dhigaysa xulashada ugu sareysa ardayda caalamiga ah maxaa yeelay si sax ah ayaa loola dhaqmaa waxaana la siiyaa daaweynta ugu wanaagsan ee suurtogalka ah marka la barbar dhigo waddamada kale.
Mid ka mid ah “daaweynta wanaagsan” ee ardayda caalamiga ahi ku raaxeystaan ​​Ireland waa bixinta deeqo waxbarasho iyo jaamacado lacag la’aan ah. Si kastaba ha noqotee, sidaan kor ku soo sheegay, jaamacadaha wax lagu barto ee bilaashka ah aad bay u dhib badan yihiin laakiin waad ku fahmi doontaa dhowr daqiiqo gudahood.
Dhammaan jaamacadaha dawliga ah ee Irland waa u bilaash muwaadiniinteeda iyo deganayaasha rasmiga ah ee sidoo kale loogu yeero ardayda gudaha. Ardaydan gudaha ah waa laga dhaafay bixinta khidmadaha waxbarashada laakiin waxay bixiyaan arjiga iyo khidmadaha caafimaadka. Ardayda kale ee laga dhaafay bixinta khidmadaha waxbaridda waa ardayda ka socota Midowga Yurub (EU) iyo waddamada Aagga Dhaqaalaha Yurub (EEA).
Marka, haddii aad ka timid mid ka mid ah waddamada EU/EEA waxaad wax ku baran kartaa Ireland si lacag la’aan ah halka ardayda ka socota waddamada aan Midowga Yurub/EES ahayn ay tahay inay bixiyaan khidmadaha waxbaridda. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira jaamacado waxbarid hooseeya iyo deeqo waxbarasho oo Ireland loogu talagalay ardayda caalamiga ah.
Markaa, adiga oo ah arday aan ahayn EU/EEA waxaad wali ku dalban kartaa deeqdan waxbarasho barnaamijkaaga shahaadada mid ka mid ah jaamacadaha Ireland. Deeqdan waxbarasho iyo jaamacadaha waxbaridda hoose ee Ireland ee loogu talagalay ardayda caalamiga ah ayaa si hoose looga dooday. Si aad si deg deg ah ugu socoto, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad isticmaasho shaxda tusmada hoose.
1 Maxay ka dhigan tahay ka -qaybgalka Dugsiga “Lacag -La'aanta Waxbarashada”?
2 Ma jiraan Dhammaan Jaamacadaha Bilaashka ah ee Waxbarshada ee Ireland?
3 Ardayda Caalamiga ahi Ma Ka Qeybgali Karaan Jaamacada Ireland Waxbarasho Lacag La'aan Ah?
4 Lix deeq waxbarasho oo Ireland loogu talagalay Ardayda Caalamiga ah
4.1 1. Jaamacadda Qaranka ee Ireland (NUI) Qorshaha Deeqda Ardayda Naafada ah
4.2 2. Golaha Qaranka ee Indhoolayaasha Ireland (NCBI) Gerard Byrne Bursary
4.3 3. Jaaliyadda St Vincent de Paul Fund and Training Bursary Fund
4.4 4. UVERSITY Deeqaha Waxbarashada Sare ee Ardayda Qaangaarka ah
4.6 6. Deeqda waxbarasho ee Naughton
5 Jaamacadaha jaban ee Ireland ee Ardayda Caalamiga ah
6 Su'aalaha la isweydiiyo ee ku saabsan Jaamacadaha Bilaashka ah ee Waxbarshada ee Ireland ee loogu talagalay Ardayda Caalamiga ah
Maxay ka dhigan tahay inaad dhigato Iskuulka “Lacag La'aanta Waxbarashada”?"
“Lacag -la’aan wax -barasho” waa weedh qeexaysa fursadda la siiyay ardayda hiigsanaysa inay shahaado ka helaan machadyadooda iyagoon bixin wax lacag ah casharradii laga bartay. Fursadda noocan ah waxaa bixiya jaamacadaha lacag la’aanta ah ee ardayda ku fiican tacliinta ama aan awoodin inay iska bixiyaan khidmadaha waxbaridda.
Jaamacadaha lacag la'aanta ah wax lacag ah kama qaadaan ardayda qaadashada koorsooyinka. Lacag kama qaadaan ardayda isqorista, bixinta buugaagta ama agabka kale ee koorsada. Jaamacadaha bilaashka ah ee waxbaridda ee Ireland ee loogu talagalay ardayda caalamiga ah waxay u furan yihiin dhammaan ardayda (deggeneyaasha iyo kuwa caalamiga ah) adduunka oo dhan.
Ma jiraan Dhammaan Jaamacadaha Bilaashka ah ee Waxbarshada ee Ireland?
Wax ku barashada Boqortooyada Midowday waa qaali marka la barbardhigo wax ku barashada Ireland. Ireland waxaa ku yaal jaamacado lacag la’aan ah oo loogu talagalay ardayda caalamiga ah ee sidoo kale u furan muwaadiniinta Ireland. Hase yeeshee, waxay ku furan yihiin shuruudo gaar ah.
Maqnaanshaha barnaamijyada deeqda waxbarasho, ardayda caalamiga ah ayaa waliba codsan kara maadaama qiimaha waxbarashada ee Ireland uu aad uga jaban yahay jaamacadaha kale ee adduunka. Marka laga hadlayo kharashyada nolosha, ardayda mustaqbalka waxay filan karaan inay ku bixiyaan inta u dhaxaysa EUR 600 ilaa 1000 bishii, taas oo ku xidhan meesha iyo sidoo kale shuruudaha ardayga.
Ardayda caalamiga ah, jaamacadaha dawladda khidmadaha waxbaridda waxay u dhexeeyaan 6,000 illaa 12,000 EUR sanadkii. Barnaamijyada qalin -jabinta, khidmadaha waxbaridda waxay u dhexeeyaan 6,150 illaa 15,000 EUR sanadkii.
Ardayda Caalamiga ahi Ma Ka Qeybgali Karaan Jaamacada Ireland Waxbarasho Lacag La'aan Ah?
Haa. Waxaa jira shuruudo gaar ah oo ay tahay in la buuxiyo si ardayda caalamiga ahi ugu raaxaystaan ​​waxbarashada lacag la'aanta ah ee Ireland. Shuruuda ayaa ah inaad tahay arday ka socda mid ka mid ah wadamada EU ama EEA si aad ugu raaxaysato waxbarashada lacag la'aanta ah ee Ireland.
Ardayda ka socota dalalka aan Midowga Yurub/EEA ahayn waa inay bixiyaan khidmadaha waxbaridda ee lagama maarmaanka ah. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira fursado deeq waxbarasho oo la siiyay ardaydan si ay uga gudbaan khidmadaha waxbaridda. Hoos waxaa ah fursadaha kaalmada maaliyadeed.
Lix deeq waxbarasho oo Ireland loogu talagalay Ardayda Caalamiga ah
Jaamacadaha ku yaal Ireland waa raqiis, runtii, waxay ka mid yihiin jaamacadaha ugu jaban Yurub ee ardayda caalamiga ah. Adigoo ah arday caalami ah oo jooga Ireland, codsashada deeqaha waxbarasho ee hoose waxay si weyn hoos ugu dhigi doontaa qiimaha waxbarashadaada Ireland.
Deeqaha waxbarasho ee Ireland ee ardayda caalamiga ah waa:
Jaamacadda Qaranka ee Ireland (NUI) Qorshaha Deeqda Ardayda Naafada ah
Golaha Qaranka ee Indhoolayaasha Ireland (NCBI) Gerard Byrne Bursary
Jaaliyadda St Vincent de Paul Fund iyo Tababarka Lacagta Tababarka
UVERSITY Deeqaha Waxbarashada Sare ee Ardayda Qaangaarka ah
1. Jaamacadda Qaranka ee Ireland (NUI) Qorshaha Deeqda Ardayda Naafada ah
Nidaamkani waa mid ka mid ah jaamacadaha lacag la'aanta ah ee wax lagu barto ee Ireland oo loogu talagalay ardayda caalamiga ah ee siisa taageero maaliyadeed ardayda dhigata shahaadada koowaad ee leh naafonimo jireed iyo/ama dareen daran oo ku jira sannadka koowaad ee barnaamijka shahaadada koowaad ee kulliyadaha la aqoonsan yahay ee NUI.
Halkan guji si aad u hesho macluumaad dheeraad ah
2. Golaha Qaranka ee Indhoolayaasha Ireland (NCBI) Gerard Byrne Bursary
Gerard Byrne Bursary-ka sanadlaha ah waa mid ka mid ah jaamacadaha lacag la'aanta ah ee wax lagu barto ee Ireland oo loogu talagalay ardayda caalamiga ah ee leh aragga naafada ah ee galaya ama hadda ku jira waxbarashada heerka saddexaad ee buuxa. Deeq -lacageedka sannadlaha ah waxaa lagu abaalmariyaa qiimaha € 1,500 sanadkiiba illaa muddada shahaadada koowaad ee jaamacadda.
Iyada oo laga duulayo saameynta Covid-19, NCBI waxaa laga yaabaa inay siiso hal qaataha deeq waxbarasho 6 bilood oo shaqo barasho ah sanad walba, taasoo ka caawineysa inay helaan khibrad shaqo si ay ugu sii diyaargaroobaan shaqo.
3. Jaaliyadda St Vincent de Paul Fund and Training Bursary Fund
Jaaliyadda St Vincent de Paul Fund iyo Tababarka Lacagta Tababarka waxay ka timid jaamacadaha lacag la'aanta ah ee Ireland loogu talagalay ardayda caalamiga ah ee taageera ardayda da 'kasta leh oo laga yaabo inaysan dhaqaale ahaan ku habboonayn inay galaan ama ku sii jiraan barnaamijyada waxbarashada heerka saddexaad iyo tababarka.
4. UVERSITY Deeqaha Waxbarashada Sare ee Ardayda Qaangaarka ah
Deeqda waxbarasho ee Uversity waxay ka socdaan jaamacadaha lacag la'aanta ah ee Ireland ardayda caalamiga ah ee loogu talagalay in lagu furo kartida bartayaasha qaangaarka ah. Waxay tan u sameeyaan iyagoo bixiya taageero maaliyadeed oo macno leh, oo sanadle ah. Deeqda waxbarasho ee Uversity waxay ujeedadeedu tahay inay meesha ka saarto caqabadaha maaliyadeed si ay u sii wataan shahaadada koowaad ee jaamacadda markii ugu horreysay.
Deeqaha waxbarasho kuma koobna maaddooyin gaar ah waxayna u oggolaan doontaa dadka qaata inay dhammaystiraan shahaadada koowaad ee mid ka mid ah hay'adaha ka qaybgalaya Jamhuuriyadda Ireland ama Waqooyiga Ireland.
Erasmus+ waa barnaamijka Midowga Yurub ee lagu taageerayo waxbarashada, tababarka, dhalinyarada, iyo ciyaaraha Yurub. Erasmus+ waa mid ka mid ah jaamacadaha lacag la'aanta ah ee wax lagu barto ee Ireland oo loogu talagalay ardayda caalamiga ah ee fursadaha u leh dadka da 'walba leh, iyaga oo ka caawinaya inay horumariyaan oo ay wadaagaan aqoonta iyo waayo -aragnimada hay'adaha iyo ururrada dalal kala duwan.
Wax ku barashada dibedda ayaa ah qaybta dhexe ee Erasmus+ waxaana la muujiyey inay saamayn togan ku leedahay rajooyinka shaqo ee dambe. Erasmus+ sidoo kale wuxuu fursad u siinayaa inuu isku daro waxbarashada dibadda iyo tababar. Fursado ayaa loo heli karaa ardayda ku jirta bachelor, master ama heerarka dhakhtarnimada.
6. Deeqda waxbarasho ee Naughton
Deeqda waxbarasho ee Naughton waxaa la keenay 2008 si kor loogu qaado barashada injineernimada, sayniska, iyo farsamada heerka saddexaad ee Ireland. Sannad kasta tiro arday gaar ah ayaa la siiyaa deeq waxbarasho si ay wax ugu bartaan heerka koowaad ee jaamacad kasta oo ay dawladdu maalgeliso ama machad heerka saddexaad ee Ireland.
Jaamacadaha jaban ee Ireland ee Ardayda Caalamiga ah
Kulliyadda Jaamacadda, Cork
Dugsiga Ganacsiga Dublin
Kulliyadda Griffith, Dublin
Kaas oo leh khidmaddiisa waxbaridda inuu noqdo EUR 17,000, taas oo ka dhigaysa inay u muuqato sidii jaamacad lacag la'aan ah oo wax lagu barto oo ku taal Ireland oo loogu talagalay ardayda caalamiga ah.
Kulliyadda Trinity Dublin waa mid ka mid ah xubnaha Jaamacadda Dublin, Kulliyadda Trinity waa jaamacad cilmi baaris dadweyne oo caan ah oo caan ah oo fadhida caasimadda Dublin. Waxaa la aasaasay 1592 waana mid ka mid ah jaamacadaha ugu cimriga dheer Ireland. Jaamacaddu sidoo kale waxay ka mid tahay toddobadii jaamacadood ee qadiimiga ahaa ee Ingiriiska iyo Ireland.
2. Jaamacadda Limerick
Waxay leedahay khidmaddeeda waxbaridda sida EUR 1200. Jaamacadda of Limerick waxay ku saleysan tahay magaalada caanka ah ee Limerick ee gobolka Midwest ee Ireland. Jaamacadda Limerick waa jaamacad cilmi baaris dadweyne oo kale oo sharaf leh. Waxaa la aasaasay 1972 waana mid ka mid ah jaamacadaha ugu darajada sarreeya ardayda caalamiga ah ee Ireland.
3. Kuliyadda Jaamacadda, Cork
Lacagta waxbarashada: Laga soo bilaabo EUR 10,000
Kulliyadda Jaamacadda (UCC) oo ku taal magaalada labaad ee ugu weyn Ireland, (Cork), waa kulliyad ka kooban Jaamacadda Qaranka ee Ireland. Waxaa la aasaasay sanadka 1845 iyada oo ka mid ah Kulliyadaha Boqoradda ee Cork, Belfast, iyo Galway.
4. Dugsiga Ganacsiga Dublin
Dugsiga Ganacsiga Dublin wuxuu leeyahay ujrooyin waxbarasho oo u dhexeeya EUR 5000 ilaa 7000.
Dugsiga Ganacsiga Dublin waa machad gaar loo leeyahay oo tacliin sare leh oo markii hore la aasaasay 1975.
Asal ahaan waxaa loo asaasay Xisaabinta iyo Kulliyadda Ganacsiga, kuliyaddan waxaa loo aasaasay inay daboosho baahi “waxbarasho ku saleysan ganacsi” oo u muuqatay inay ka maqnayd Ireland xilligii la aasaasay.
5. Kulliyadda Griffith Dublin
Lacagta waxbarashada: Laga soo bilaabo EUR 12,000
Waxay ku taallaa magaalada Dublin, Griffith College Dublin waa machad gaar loo leeyahay oo tacliinta sare ah. Waxaa la aasaasay 1974, waa mid ka mid ah kulliyadaha ugu waaweyn uguna da'da weyn ee laga aasaasay dalka. Kulliyadda waxaa loo abuuray inay siiso ardayda tababarro ganacsi iyo xisaabaad.
Si kastaba ha noqotee, gelitaanka mid ka mid ah jaamacadaha ajuurada waxbaridda ee hooseeya oo leh hal ama dhowr kaalmo deeq waxbarasho oo loogu talagalay ardayda caalamiga ah waxay ka dhigi kartaa waxbarashada gabi ahaanba bilaash. Sidaa darteed waxay u noqon kartaa jaamacadaha lacag la'aanta ah ee Ireland ardayda caalamiga ah.
Su'aalaha la isweydiiyo ee ku saabsan Jaamacadaha Bilaashka ah ee Waxbarshada ee Ireland ee loogu talagalay Ardayda Caalamiga ah
1. Waxbarashadu ma u bilaash tahay Ireland ardayda caalamiga ah?
A: Shahaadooyinka shahaadada koowaad waa u bilaash muwaadiniinta ka timid Ireland. Kharashyada waxaa daboola Hay'adda Tacliinta Sare (HEA). Dhammaan koorsooyinka tacliinta sare ee ay bixiyaan jaamacadaha dawladdu ma aha bilaash.
Si ardayda caalamiga ahi uga faa'iidaystaan ​​“hindisaha khidmadaha bilaashka ah”, waa inay codsadaan barnaamijka maalgelinta dawladda oo ay muujiyaan inay u qalmaan. Uma qalmaan haddii:
- Waxay hore u haysteen shahaadada heerka koowaad
-Waxay hore u haysteen shahaado jaamacadeed
- Waxay ku celcelinayaan sannad waxbarasho.
Jinsiyadda, xaaladda socdaalka, degenaanshaha, iyo shuruudaha koorsadu waa shuruudo kale oo u qalmi kara ardayga mid ka mid ah jaamacadaha lacag la'aanta ah ee Ireland ee ardayda caalamiga ah.
2. Sideen ugu baran karaa Irland lacag la’aan?
A: Heerar fiican ka hor intaadan aadin Ireland: Waxaa inta badan lagu qiimeeyaa diiwaanadeena waxbarasho. Dadka iyo macallimiintu waxay inta badan ku saleeyaan wax -qabadkeena iyo filashooyinkooda ku -salaysnaantii hore ee ay dejiyeen tijaabooyinkayaga waxbarasho.
Tani waa run dhammaan jaamacadaha lacag la'aanta ah ee ku yaal Ireland ardayda caalamiga ah. Shaqooyinka manhajka dheeraadka ah ayaa sidoo kale la hubiyaa marka la codsanayo mid ka mid ah jaamacadaha lacag la'aanta ah ee Ireland ardayda caalamiga ah. Tani waa sababta ay tahay inaan ugu dadaalno inaan helno diiwaanno tacliimeed oo heer sare ah si aan u helno codsi sahlan jaamacadaha lacag la'aanta ah ee Ireland.
Dhisidda codsi wanaagsan iyada oo loo marayo tijaabooyin wanaagsan, maqaallo, iyo shuruudo kale:
Arday kasta waxaa laga filayaa inuu u dhiso codsi wanaagsan jaamacadaha lacag la'aanta ah ee Ireland ardayda caalamiga ah. Dalbashada jaamacadahaan waxay u baahan tahay waqti, dulqaad, iyo u heellan waayo waxaa laga yaabaa in loo adeegsado halbeeg si aad u eegto nooca ardayga aad noqon karto haddii lagu aqbalo jaamacaddooda.
Waqtigaaga qaado si aad u qorto qormada ugu fiican oo tuseysa qofka aad runtii tahay arday ahaan.
Weydiiso caawimaad ku saabsan sida loo abuuro arji wanaagsan: Had iyo jeer raadso caawimaad marka aad qoreyso arjigaaga maadaama tani ay leedahay hab lagu siinayo aaladaha maqaallada iyo faylalka tayo wanaagsan leh. Caawinta dadka kale ee aqoonta u leh waxa la sameeyo iyo dukumiintiyada loo adeegsan doono arjiga waa in la buuxiyaa si loo yareeyo buufiska.
Ka codso deeqaha waxbarasho jaamacadaha Ireland: Kulliyadda Jaamacadda Dublin oo ku taal Dublin iyo Trinity College Dublin waa tusaalooyinka kulliyadaha caanka ah ee deeqda waxbarasho siiya ardaydooda. Barnaamijka deeqda -waxbarasho waa hab weyn oo bilaash loogu tago mid kasta oo ka mid ah jaamacadaha bilaashka ah ee wax lagu barto ee Ireland ee loogu talagalay ardayda caalamiga ah. Barnaamijyada deeqda waxbarasho ee noocan oo kale ah ayaa inta badan lagu dhajiyaa mareegaha jaamacadda.
Barnaamijyada deeq -lacageedka waxay siiyaan sanduuqa deeq -lacageedka ardayda kaas oo siiya ardayda karti u leh inay ka soo baxaan shuruudaha maaliyadeed ee jaamacadaha sida buugaagta iyo ajuurada kale.
Ka raadi jaamacadaha la awoodi karo Ireland: Tani waxaa loogu talagalay kuwa aan haysan deeq waxbarasho. Celceliska qiimaha waxbaridda ee Ireland wuxuu kudhowaad yahay $ 7,000 waxayna kuxirantahay aagga waxbarashada. Ardayda guud ahaan waxaa lagula talinayaa inay aadaan jaamacad ka raqiisan inta ay codsanayaan mid ka mid ah jaamacadaha lacag la'aanta ah ee Ireland ardayda caalamiga ah.
Ku shaqee waqti-dhiman Ireland: Tani waxay si gaar ah ugu tahay ardayda haysata fiisooyinka ardayga, ka shaqaynta Ireland waxaa loo oggolaan doonaa oo keliya haddii aad ka qaybgasho koorso ku qoran Liiska Ku-meelgaarka ah ee Barnaamijyada U-qalma (ILEP) ee ku qoran mareegaha dawladda, oo leh saacado kooban toddobaadkii iyo xilli kasta.
Kuwaan iyo qaar kaloo badan ayaa ah dariiqyada lagu galo jaamacadaha bilaashka ah ee wax lagu barto ee Ireland ardayda caalamiga ah.
Gabagabadii, jaamacadaha Ireland way ka jaban yihiin waxayna leeyihiin barnaamijyo waxbarasho oo tayo leh oo qaabila ardayda caalamiga ah iyo sidoo kale muwaadiniinteeda.
Shuruudaha Jaamacadda Trent | Khidmadaha, Barnaamijyada, Deeqaha waxbarasho, Darajooyinka
13 Deeqaha Dibloomada Sare ee Kenya
Dibedda Ku Baro Iyada oo Deeq waxbarasho la siinayo Barashada Hagaha Dibadda Deeqaha UK Ka hooseeya Deeqaha waxbarasho
jaamacadaha waxbarashada hoose ee Ireland ardayda caalamiga ahdeeqaha waxbarasho ee Ireland ee ardayda caalamiga ahjaamacadaha bilaashka ah ee wax lagu barto ee Ireland ardayda caalamiga ah
Previous Post:8 Sababood Oo Aad Ugu Baahan Tahay Inaad Ka Barato Kala Duwanaanshaha Iyo Ka Mid Noqoshada
Post Next:12 Dugsiyada Bayoolajiga ugu Fiican California